Ny governemantan’i Kosovo no voalohany nidaboka ao anatin’izao krizin’ny coronavirus manerantany izao · Global Voices teny Malagasy
Napongatry ny hamehana ny fifanenjanana tao amin'ny fiaraha-mientan'ireo antoko mitondra
MpanoratraJosé Carpintero Molina
Voadika ny 03 Avrily 2020 9:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Ελληνικά, Shqip, عربي, English
Mively lapoaly sy vilany vy ao Kosovo miaraka amin'ny sora-baventy mivaky hoe “Ianareo no mitondra ny fikoropahana ato an-tranonay” sy ny farangonteny #StayAtHome amin'ny fiteny Albaney. Saripikan'i Adelina Tërshani, nahazoana alalana.
Taorian'ny fotoam-pivoriana naharitra 12 ora, resy tamin'ny latsabatom-pitsipaham-pitokisana ny governemantan'i Kosovo tamin'ny 26 marsa na dia teo aza ny fanoherana avy amin'ny olom-pirenena izay te-hahita kokoa ny firaisankinan'ny manampahefana manoloana ny fielezan'ny valan'aretina COVID-19.
Tamin'ny vato 82 manoloana ny 32, ary iray no tsy tonga nandatsa-bato, naongan'ny depiote ny Praiminisitra Albin Kurti, mpitarika ny antoko Vetëvendosje (“fizakantena” amin'ny teny malagasy) izay nivadihan'ny vondrona mpiara-dia taminy taloha, ny Ligy Demaokratikan'i Kosovo (LDK).
Ny fepetra hamehana vao haingana hiadiana amin'ny fianahan'ny coronavirus no nampipongatra ny fifanenjanana tao anatin'ny vondrona mpiaradia nisy teo amin'ny Vetëvendosje sy ny LDK, izay vao 52 andro monja izay no nanangana governemanta.
Tamin'ny 18 Martsa, noroahin'ny praiminisitra Kurti ny Minisitry ny Atitany Agim Veliu, avy ao amin'ny ligy LDK, noho ny fifandirana momba ny fanambarana ny firenena an-kamehana, izay mety hanome fahefana bebe kokoa ho an'ny filoha Hashim Thaçi, avy ao amin'ny LDK ihany.
Niharava hatrany ny vondrona raha nanambara tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina izay heverin'ny Thaçi fa tsy araka ny lalàmpanorenana ny praiminisitra.
Nanapa-kevitra hametraka tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ny Governemanta.
Miantso ny polisy ao Kosovo ny filoha mba tsy hampihatra izany, mandray ity fepetra ity ho tsy manaraka ny lalàmpanorenana.
Ao Kosovo, miady amin'ny Covid-19 amin'ny fomba miarana (mitady vola tafahoatra) isika – olom-pirenena manara-dalàna sy mpanao politika mikorontana.
Aza andramana any an-trano izany.
Tonga tamin'ny ambaratonga vaovao ny adilahy ara-politika ao #Kosovo satria mangataka amin'ny olom-pirenena ankehitriny i Thaci mba tsy hanaja ny famerana vaovao napetraky ny governemanta amin'ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin'ny 10maraina-4hariva + tsy fivoahana ny trano 8hariva, milaza fa tsy manaraka ny lalàmpanorenana ireny. Mitaky hametrahana ny firenena an-kamehana izy izay mety hanome fahefana bebe kokoa ho azy.
Mihiboka ao an-trano, nikarakara fihetsiketsehana amin'ny endrika cazerolazo ny Kosovara — mampaneno vilany sy lapoaly avy eny am-baravarakely sy ny lavarangana — ho fanoherana ny vato fitsipaham-pitokisana izay atahoran'ny maro fa hitondra ny firenena ao anaty korontana ara-dalàmpanorenana eo anivon'izao fielezan'aretina sy ny fitotongan'ny toekarena ankapobeny izao.
Hatramin'ny fotoana nanoratana [ny teny anglisy], dia ahitana tranga COVID-19 voamarina miisa 86 ao Kosovo sy fahafatesana iray, araka ny tahiry ofisialy avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana.
Ao anatin'ny hadalana ara-politika ankehitriny: Raha mirohotra manakana ny fiparitahan'ny #COVID19 izao tontolo izao, mihaona kosa ny parlemantan'i Kosovo mba hanongana ny governemantan'ny PM @albinkurti- Raha manitatra ny fe-potoam-piasan'izy ireo ny governemanta Eoropeana, hamela ny firenena tsy hanana (gvt) kosa ity parlemanta ity
Manoloana ny sehatra ara-politika mikorontana sy ny fiparitahan'ny COVID-19, nitaky ny hanaovana fihetsiketsehana milamina eny am-bavaravarankely sy lavarangana ao amin'ny Facebook ny vondrona mpikatroka eo an-toerana Replikë
Ity misy lahatsary tsara indrindra ahitana ny mponina #Prishtina mankeo amin'ny lavarangan'izy ireo mba hanohitra amin'ny vilany sy lapoaly ny drafitry ny LDK hanongana ny governemantan'i #Kosovo ao anatin'ny krizin'ny #covid19.
Tontosaina isaky ny alina amin'ny 8 hariva ny fihetsiketsehana, ankoatra ny tamin'ny 25 Martsa, izay natao tamin'ny 11 maraina, nandritra ny latsa-bato fitsipaham-pitokisana.
Miharatsy ny toe-draharaha ara-politika ao Kosovo. Tsy raharahian'ireo sokajy ara-politika ny fitakian'ireo olom-pirenena an'arivony taorian'ny dimy andro nisian'ny fihetsiketsehana. Etsy ankilany, mitombo ny tranga valan'aretina ao Kosovo. Hitabataba foana izahay manda-pandrenesan’ ireo mpanao politika anay.
Araka ny notaterin'ny fampahalalam-baovao tsy miankina Kosovo 2.0:
Notontosaina ihany ny fivoriana marathon an'ny parlemanta na dia teo aza ny fandraràn'ny governemanta izay rehetra famorivoriana, nanao saron-tava teo amin'ny vavany sy ny orony ireo solombavambahoaka, raha noraràna kosa ireo mpanao gazety sy vahiny hafa mba hahafahan'ireo solombavambahoaka mahazo elanelana 1,5 metatra eo amin'izy ireo.
Olom-pirenena Prishtina am-polony no tonga nanao fihetsiketsehana teo anoloan'ny lapan'ny antenimiera, manao sarom-bava ny ankamaroan'izy ireo ary mitandrina tsara mba hanaja ny elanelana 2 metatra takiana amin'ny rehetra. Nilanja sora-baventy natao tanana izy ireo izay mivaky hoe “manohitra ny fitsipaham-pitokisana”.
Notsikerain'ny ambasady Alemàna sy Frantsay ny fanapahan-kevitra hanao fitsipaham-pitokisana. Nandà ny fanohanana ny fitsipaham-pitokisana ihany koa ny filoha lefitry ny LDK, Vjosa Osmani,
Ny ambasadaoron'ny 🇫🇷 sy 🇩🇪 miaraka nankao amin'ny praiminisitra lefitra Hoti misolotena ny filoha M. Mustafa mba haneho ny ahiahian'ny renivohitra roa tonta.
Miaraha amin'ny vahoaka Kosovar ao anatin'izao krizy izao. Iangavio ny LDK mba hihevitra indray ny vato fitsipaham-pitokisana ary hitàna ny governemanta mitombina hiatrehana ireo fanamby maro.
Etsy andaniny, noderain'i Etazonia ny fiovan'ny governemanta satria hita fa manohana kokoa ny fifampiraharahana fandriam-pahalemana tarihin'ny fitondrana Trump ifanaovana amin'i Serbia ny filoha Thaçi izay toherin'ny praiminisitra teo aloha Kurti mafy.
Maro ireo nahatsiaro fa nitovy tamin'ny hetsika manohitra ny fitondrana Milosevic tamin'ny taona 1990 ny fihetsiketsehana vilany sy lapoaly. Hoy ny vakin'ny taratasy avy amin'ny tonian-dahatsoratry Kosovo 2.0 hoe:
(…) Tsaroako ny alina iray tamin'ny taona 1990, fony aho 6 taona, manapoaka vilany sy sotro miaraka amin'ny zokiko vavy roa teo am-baravarankelin'ny tranom-pianakavianay, manapoaka lapoaly sy manakorintsana lakile. Iray amin'ireo fomba maro hanehoana ny fihetsiketsehana tamin'izany fotoana izany. Nanakoako manerana ny faritra ny feom-by, ary azo antoka fa nampian'ny feon'ny tsy fifaliana manerana ny tanàna izany; fomba hafa tahaka izany no tena anisan'ny fampahatsiahivana indray nataon'ny vahoaka amin'ny fomba nanombohana ny taom-polo.
Ao amin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny 21 Marsa ho an'ny gazety mpivoaka isan'andro Koha Ditore, naneho fahatsapana mitovy amin'izany ilay mpanao politika teo aloha sady mpanao gazety Veton Surroi satria izy no nanomboka ny fihetsiketsehana fikapokapohana vilany manohitra an'i Milosevic, tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina teo an-toerana tamin'izany fotoana izany. Nampiany ihany koa fa miala tsiny izy mahita fa nahatonga ny olom-pirenena hanao izany 30 taty aoriana ny krizy vaovao ara-politika.